COVID- 19 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေး (၅/၂၀၂၀) ကျင်းပ
နေပြည်တော် မေလ ၂၀ ရက်
COVID-19 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေး (၅/၂၀၂၀) ကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့် စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီဝင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများဖြစ်သော စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဉီးစိုးဝင်း၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဦးသိန်းဆွေ ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးကျော်ကျော်မောင်၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီးများ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီ၏လုပ်ငန်း အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌက မိမိတို့ လုပ်ငန်းကော်မတီအနေဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှစ၍ အစည်းအဝေး ၄ ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပါကြောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၃) ခု ချမှတ်ခဲ့ နိုင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မြန်ဆန်သွက်လက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ လုပ်ငန်းကော်မတီအနေဖြင့် COVID-19 ကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် COVID-19 Fund မှ ချေးငွေများစိစစ်ထုတ်ပေးခဲ့ရာ သုံးကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခင် သုံးကြိမ်တွင် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်ဖြစ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ အများစုဖြစ်သော်လည်း ယခုစတုတ္တအကြိမ်တွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အခြေစိုက်ဖြစ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဉီးစားပေး ဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း၊ ချေးငွေများကို ယခုထက်ပိုမို၍ မြန်ဆန်သွက်လက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် စိစစ်သည့်အဖွဲ့များအား အင်အားဖြည့်တင်း၍ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ဆက်လက်၍ တက်ရောက်လာကြသူများမှ နိုင်ငံတော်မှ ထပ်မံခွင့်ပြုမည့် ချေးငွေများ ထုတ်ပေးရာတွင် CERP နှင့်အညီ ပိုမိုထိရောက်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ချေးငွေထုတ်ပေးနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်လာရေးအတွက် လက်ရှိဉီးစားပေး ကဏ္ဍများအပြင် ထပ်မံဆောင်ရွက်သင့်သည့် ဉီးစားပေးကဏ္ဍများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးမှ COVID-19 ကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသောလုပ်ငန်းများအတွက် စတုတ္တအသုတ်အဖြစ် ချေးငွေထပ်မံထုတ်ပေး နိုင်ရေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရကပေးအပ်သည့် အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ စာချွန်လွှာ (၃) ခု လက်မှတ်ရေးထိုး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစ္စရေးနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E Mr. Ronen Gilor အား Virtual Meeting ဖြင့် လက်ခံတွေ့ဆုံ
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၇/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ကြေညာ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသောင်းထွန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဉရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kristian Schmidt အား Video Conferencing စနစ်ဖြင့် လက်ခံတွေ့ဆုံ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွီဒင်သံအမတ်ကြီး Mr. Staffan Herrstrom အား တွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် video conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၃၆)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ၏အထူးအစည်းအဝေး တို့သို့ ပါဝင်တက်ရောက်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ၌ အငယ်တန်းစာရေး(၁၇) နေရာခန့်အပ်နိုင်ရေး လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုအောင်မြင်သူအမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြိမ် OECD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒသုံးသပ်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes အား Virtual Meeting ဖြင့် လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း VIDEO CONFERENCING စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဝန်ကြီးများ၏ (၁၀) ကြိမ်မြောက် ကြားဖြတ် အစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chen Hai အား Video Conferencing စနစ်ဖြင့် လက်ခံတွေ့ဆုံ